Etu esi choputa PDF file na Adobe | Martech Zone
Maka afọ ole na ole gara aga, eji m nnukwu ihe -atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ mpikota onu m PDF faịlụ maka iji intaneti. Ọsọ bụ ihe dị n'ịntanetị oge niile, yabụ na m na-eziga faịlụ PDF ma ọ bụ na-akwado ya, Achọrọ m ijide n'aka na agbakọtara.
Gini kpatara mpikota a PDF?
Mkpakọ nwere ike were faịlụ nke ọtụtụ megabytes wee weda ya narị narị kilobytes ole na ole, na-eme ka ọ dị mfe iri ari site na injin ọchụchọ, na-eme ya ngwa ngwa ibudata, ma mee ka ọ dịkwuo mfe itinye na ibudata site na email.
Mgbe ụfọdụ ahịa na-ajụ m ihe ntọala ndị kasị mma maka PDF mkpakọ… ma ọ bụghị ịbụ onye ọkachamara na mkpakọ na mbupụ ntọala, M na-eme ihe n'eziokwu enweghị echiche ebe na-amalite. Ọ bụrụ na ị bụ onye pro ma ghọta CCITT, Flate, JBIG2, JPEG, JPEG 2000, LZW, RLE, na ZIP compression ntọala… ejiri m n’aka na ị nwere ike ịchọpụta ya. Enwere ọtụtụ isiokwu n'ebe ahụ.
Ọ ga-akara m mma iji ngwa mkpakọ rụọ m ọrụ ahụ. Obi dị m ụtọ, Adobe na-enye naanị nke ahụ!
Etu esi eji compress a PDF were Adobe Acrobat
Ihe m na-aghọtaghị bụ na nke m Adobe Creative Cloud Ikike etinyelarị ihe mkpakọ arụpụtara n'ime Acrobat, Adobe's platform for editing, designing, and integrating PDFs. Ọ bụrụ n’ibudata Acrobat, ị nwere ike ịpịkọta PDF gị n’ụzọ dị mfe:
Mepee PDF na Acrobat DC.
Meghee Ebuli PDF ngwá ọrụ iji mpikota akwụkwọ PDF.
họrọ Ngwaọrụ> Ebuli PDF ma ọ bụ pịa na ngwá ọrụ si n'aka nri panel.
họrọ Belata Size File n’elu menu.
Nịm ndakọrịta nke Acrobat mbipute ma pịa OK. Ndabere ga-adị na mbipute dị.
họrọ Nkwalite dị elu na elu menu ime ka mmelite ihe oyiyi na font mkpakọ. Pịa OK mgbe ịmechara mgbanwe.
họrọ Faịlụ> Chekwa Ka. Debe otu aha faịlụ ahụ ka ịdegharị faịlụ dị ugbu a ma ọ bụ nyegharịa faịlụ ọhụrụ ahụ na obere PDF. Họrọ otu ọnọdụ ma pịa Chekwa.
Etu esi eji compress a PDF na Adobe Online
Ọ bụrụ na ị nwere Adobe Creative Cloud Ikike, ikwesighi ibudata Adobe Acrobat iji kpokọta PDFs gị! Adobe nwere ngwa dị n'ịntanetị ị nwere ike iji!
Dị nnọọ bulite a PDF na Adobe ga mpikota onu na ibudata ya. Ọ dị mma ma dị mfe!
Mpikota PDF Online
Tags: acrobat dcadobeadobe acrobatAdobe Adobe Cloudbulie ịntanetịCCITTmpikota pdfmkpakọ ntọalaGbagideOJ2jpegJPEG 2000LZWpdfpdf mkpakọGAA